Ihe ndị ahịa kwenyere bụ ihe ịga nke ọma atọ na - eduga mmadụ | Martech Zone
Nnukwu folks na Mpempe akwụkwọ nyochara azụmaahịa 200 pere mpe na nke ọkara na US na ndị na-abụghị uru iji mata ebe ndị ahịa na-aga nke ọma na atụmatụ ezighi ezi ha. Ihe omuma ihe omuma a bu ihe omuma Njide nke Ọchịchị Lead na 2016 kọọrọ ya nghọta ndị ọzọ dị mkpa banyere ijide ihe ịma aka na atụmatụ.
Budata State nke Lead Capture na 2016
Ihe mbụ ha chọpụtara, ahịa ahụ chọrọ nghọta maka ahịa ndị na-emechi, karịrị akarị. N’ụzọ na-akpali mmasị, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ewepụ ahịa site na azụmaahịa - ọkachasị ma ọ bụrụ na ha na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ. Enwere egwu na-atụ ụjọ na ọ bụrụ na ịkekọrịta ozi ahụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa gị ma nwee ọganiihu, ụlọ ọrụ azụmaahịa gị nwere ike belata ngwa ahịa ha ma ọ bụ kpebie bulie ọnụahịa ha. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ụjọ gị… chọrọ ụlọ ọrụ azụmaahịa ọhụrụ.
Naanị 19% nke ndị ahịa ahịa na-eji sọftụwia CRM na-ere ahịa iji soro ụzọ kachasị mma
Nchọpụta nke abụọ bụ na ndị na-ere ahịa kwesịrị ibelata na-emefu na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ekwenyeghị m. Echere m na ihe ndị ahịa ahịa kwesịrị ime, kama, na-ebelata atụmanya ha na mgbasa ozi mgbasa ozi ga-emepụta ndu kpọmkwem (na mpụga nke ntugharị). Anyị na ndị ahịa na-arụkarị atụmatụ ịkwụ ụgwọ ebe anyị na-akwagide maka ntụgharị site na nyocha akwụ ụgwọ, mana anyị na-akwalite ọdịnaya site na mgbasa ozi mmekọrịta iji wulite ntụkwasị obi na mmata.
Ọ bụrụ n ’ịlele ọganiihu ahịa nke onye mechara kwuo na ọ na - eduga gị, ị naghị akwụwa aka ọtọ iji mezuo atụmatụ ọtụtụ ọwa gafee ebumnuche ndị na - agụ ya. Mgbasa mgbasa ozi bụ ezigbo akụ nke m ga - agba ndị ahịa ume ka ha bawanyewanye, ọ bụghị ibelata.
78% nke ndị ahịa jiri Google Adwords na mgbasa ozi mgbasa ozi
Nchọpụta ikpeazụ, njikarịcha ntụgharị, bụkwa ndụmọdụ gbara ọkpụrụkpụ. Ọ na-amasị m ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-achọkarị isi mmalite nke ndị ọbịa ma ha anaghị azụlite ma gbanwee ndị ọbịa ha nwere. Nwalee verbiage, enye, ọdịda peeji nke, ụdị, layouts, agba, aghụghọ, vidiyo, saịtị, na-elekọta mmadụ mmelite… ihe niile metụtara gị dijitalụ ọnụnọ ga-amụba akakabarede udu.
Ebumnuche njikarịcha na-agwụcha dị ka teknụzụ ọhụụ, omume onye ọrụ yana usoro okike na-aga n'ihu na-apụta. Ahu nagide nchịkọta, ọnụego mgbanwe, na ule A / B iji mee ka ndị ọbịa ị nwere n'ime ndị ahịa.
45% nke ndị ahịa enweghị ike ijikọ itinye ego na ntụpọ dị iche iche na akara ha
Tags: ule uleAnalyticsakakabaredenjikarịcha ntụgharịmgbanwe ntụgharịmgbanwempempe akwụkwọinfographicndu nduelekọta mmadụ na-eduga nduelekọta mmadụ media na-edugatesting
Feb 24, 2016 na 9:55 PM
Ọtụtụ na-amụta banyere ihe ndị dị mkpa dị ka nke a. Daalụ maka ozi na ihe ọmụma.